Wholesale kumucheto kutema akaona Mugadziri uye Mutengesi | Kusanganisa
Otomatiki yakakwenenzverwa pamupendero yekucheka saha ichishandisa kumucheto kwekucheka kweplywood uye mamwe mabhodhi ehuni kusvetuka kukuru kubva pamanyorero ekucheka kusvika kune otomatiki kucheka. Zvichienzaniswa neyakajairika ruoko kusunda saha, muchina uyu une zvishanu hunhu: yakakwira kunyatsoita, kushanda kwakanyanya, kuchengetedza simba, kuchengetedza basa uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza.Muchina uyu unotora CNC dhizaini dhizaini, jeko resaha rinogona kugadzirisa otomatiki kumhanya maererano nemamiriro ekucheka, kuda kwete kumisa jira resaha, uye woziva otomatiki ekuisira uye ekurasa marara.
kushanda kwakachengeteka uye kuri nyore, kushanda kwakagadzikana, ruzha rwakaderera ndizvo zvakanaka. Otomatiki saha yekucheka mhando iri kumusoro, kumucheto kwebhodhi mushure mekucheka kuchave kwakatsetseka, pasina kumucheto, uye saizi yezvakapedzwa zvinhu zviri zvakajairwa. Kugadzirwa kwekugadzirisa kwakagadziridzwa zvakanyanya, uye mabhenefiti ayo akazara anoonekwa.
1. Chimiro chikuru chakasimba nekuomarara zvakakwana uye kugadzikana kwepamusoro.
2. Iyo ine pre-loader mudziyo, iyo yekugadzira kugona uye kushanda kwayo kwakakwirira: kumwe kusuduruka kushanda kunogona kuburitsa 4000-5000 (18mm).
3. Iyi saw ine yakakwira chaiyo anti-kupfeka gwara njanji, yakakwira chaiyo yekucheka.
4. Maitiro ese ekushanda anodzorwa nePLC, kucheka uye kuisira kuri otomatiki.
5. Ine mudziyo wekubvisa mupendero marara kure otomatiki.
6. Muchina uyu unongoda vashandi vaviri, unogona kuchengetedza mutengo wevashandi.
7.Iyi yakaona yakanaka kwazvo guruva kuunganidza system, ichaunganidza guruva rese remuchina, uye guruva rinopedza musimba rakasimba.
Otomatiki kukwirira kwakaringana kumucheto kucheka saha
Pashure: 8ft & 9ft ukanyatsotarisisa peeling mutsetse
Zvadaro: grinder yebanga